रुखमै डेरा बनाएर अनलाइन पढ्ने विद्यार्थी एकाएक भाइरल बनेपछि उपमेयर बिमलाकाे ध्यानाकर्षण! – PathivaraOnline
Home > समाचार > रुखमै डेरा बनाएर अनलाइन पढ्ने विद्यार्थी एकाएक भाइरल बनेपछि उपमेयर बिमलाकाे ध्यानाकर्षण!
रुखमा डेरा बनाएर पढ्न अग्रसरता देखाएका छात्र मगरको प्रोत्साहनका लागि उपमेयर राई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-६ मंगलटारका वडाध्यक्ष रमेश राउतसहित अर्खौले पुगेका थिए । महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्ने अवस्था नभएपछि नगरपालिकाको निर्देशन अनुसार विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन भएकाे थियो ।
यसरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा छात्र मगर अर्खौलेको नवलपुर सिम्लेस्थित घरनजिकै रुखमा डेरा बनाएर भर्चुअल कक्षामा सामेल भएका थिए । छात्र मगरले घर वरपर मोबाइल डाटा कनेक्ट हुने ठाउँ खोजेर रुखमा डेरा बनाएर अनलाइन कक्षामा सहभागी भएको बताए । हाल उनी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन् ।
सर्वहारा बर्गकि नेतृ बिद्या भट्टराई र पुँजीपति बर्गका नेता खेमराज पाैडेलको सम्पत्ति ठ्याक्कै उल्टो? कम्यूनिष्ट नै ३ छक्क पर्ने बिद्याको सम्पत्ति! कस्को कति? हेर्नुहाेस्